Taariikhda Qoraalka Far Soomaaliga: Qeybtii 5aad
Taariikhda Qoraalka Far Soomaaliga: Qeybtii 5aad
Guddigii intuusan shaqadiisa dhammeystirin ayuu Yaasiin ka baxay.(Yaasiin waxaa lagu eedeynayaa inuu guddigaas isagu iska casilay). Muuse Galaal oo difaacaya inay dawladu tallaabadii saxda ahayd qaadey marka ay guddigan soo xushay wuxuu ku doodey inay dawladu gacanta u gelisay raggii inay dhibaatadan farta haysta xalliyaan kuwii wax ka allifey ama kala taageersanaa farahan kala duwaan.
Wuxuu yidhi waxaa dhab ah in laba xubnood ay taageersan tahay farta Carabiga, laba xubnoodna farta Laatiinka iyo laba xubnood oo taageersan faraha kala duwan ee Soomaaliga. Yaa kale oo arrintan xalin lahaa? Haddii ay ku heshiiyana waa wanaag, haddii ay ku heshiin waayaana dhibaatadu wey taagnaaneysaa (Linguistic Report, 1962) Guddigaasi waxay taageero dhaqaale ah iyo mid niyadadeedba dawlada kama uusan helin.
Tusaale ahaan, wax dhaqaale ah oo guddigaas loo qoondeeyey ma uusan jirin, dhinaca kale laba xubnood oo muhim guddiga u ahaa oo kala ahaa Maxamuud Saalax iyo Mustafe Sheekh ayaa wasaaradihii ay u shaqeynayeen waxay u beddeleen gobolada. Khaliif Sudi waxaa u suutoobi weydey inuu shirarka si joogta ah uga soo qeybgalo, waayo goobtii uu ka shaqeyneyey ayaa cadaadis laga saarey. Codsiyo ay guddigu u gudbiyeen wasaaradaha si labadaas nin ee guddiga ka mid ah Muqdisho loogu soo celiyo wax natiijo ah kama aysan helin. Dawladdu arrintaas wax siyaasad ah kama aysan lahayn, ee iska qas iyo nidaam daro un buu ahaa.
Xubin kasta oo guddiga ka mid ah waxaa loo diyaariyey inuu qaato casharo ku saabsan qoraalka faraha, codeynta bilowga ah iyo hab –dhismeedka af Soomaaliga iyo codadka, iwm, si uu faraha u kala saaro, isagoo eegaya sida ay u waafaqsaaneyso farahaha casriga ah. Inta aan far kasta baadhitaan iyo deraasaad lagu sameynin, waxay guddigu ku heshiiyeen in 17 qoddob oo aasaasi ah in saldhig looga dhigo kala saaritaanka farahaas. Arrintaas waxaa loola jeeday inay adkaan lahayd in qoddobadaas lagu heshiiyo, haddii deraasaadka mar hore la sameeyo. Waayo, taageerayaasha faraha kala duwani waxay ogaan lahaayeen meelaha farta ay taageersan yihiin ay ku liidato.
Sidaas darteed, wax dhibaato ah lagalama kulmin inay xubnaha guddigu qoddobadaas ansaxiyaan, sababtoo ah midna ma garaneyn inay fartiisu gudbi doonto iyo inay qoddobadan ku dhici doonto toona.
Marka waxyaabaha kale laga reebo, farta aan mustaqbalka qaadan doono waa inay astaamahan soo socda leedahay:
1. Waa inay xuruuftu cod leedahay
2. Waa in qoraalka xurufteedu sahlan yahay
3. Waa in aysan lahayn calaamado gaar ah oo codka kala
4. Waa in aysan lahayn calaamado hal wax ka badan loo isticmaalo
5. Waa in aysan lahayn laba ama caalamado ka badan oo codadka keliya
6. Waa in aysan lahayn calaamado laftoodu cod u taagan ama leh
7. Waa inay leedahay qalabka wax lagu daabaco oo hada waddanka laga
8. Waa inay nidaamka Calaamadaha Caalamiga ah waafaqsan tahay
9. Waa inay habbeysan tahay (standarised)
10. Waa inay hab xuruufeed ku salleysan tahay
11. Waa inay dhaqaale ahaan loo awoodi karo
12. Waa in far la isku dardari karo lagu qori karo
13. Waa in aysan jirin wax la mid ah (unique)
14. Waa in lagu qori karaa dhammaan lahjadaha af Soomaaliga
15. Waa in aysan adkayn in dib u habbeyn lagu sameeyo
16. Waa in dugsiyada lagu dhigaa
17. Waa inay xuruufteedu leedahay cod joogta ah oo loo yeqaano (Linguistic Report, 1961, p. 11-12)